अरुलाई बचाउने र बाच्न सिकाउने उनले क्यान्सरलाई जित्न सकिनन् ! – Khabarhouse
अरुलाई बचाउने र बाच्न सिकाउने उनले क्यान्सरलाई जित्न सकिनन् !
Khabar house | २६ फाल्गुन २०७६, सोमबार ०६:०२ | Comments
चितवन: सामाजिक व्यक्तित्व डा.बीएम खरेलको निध’न भएको छ। उपचारको क्रममा आज (आइतबार) राती ९ः३९ बजे पुरानो मेडिकल कलेजमा डा.खरेलको निधन भएको हो। डा.खरेल लामो समयदेखि क्यान्सर रोगबाट ग्रसित हुनुहुन्थ्यो ।घरमै आराम गरिरहनु भएकी खरेललाई असहज भएपछि अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । डा.खरेलका एक मात्र छोरा छन् ।
डा.खरेल श्रीमान डा.प्रमोद लामिछानेसंगै एलाइभ हस्पिटललाई अगाडि बढाई रहनु भएको थियो । उहाँ एलाइभ हस्पिटल एण्ड ट्रमा सेन्टर प्रा.लि.भरतपुरको संस्थापक एवंम प्रवन्ध निर्देशक हुनु हुन्थ्यो । उहाँ आफै क्यान्सरबाट ग्रसित भए पनि बिरामीको उपचारमा खटिरहनु भएको थियो । डा.खरेल र डा.प्रमोदले थुप्रै बिरामीको निःशुल्क उपचार गरेर समाजमा उदाहरणीय व्यक्तित्वको रुपमा पहिचान बनाएका छन् ।
क्यान्सर भएको थाहा पाए पछि उनी थप उपचारका लागि भारत समेत पुगेकी थिइन् । त्यहाँका चिकित्सकले अन्तिम स्टेजको क्यान्सर भएकाले निको नहुने कुरा बताएका थिए । उनीहरुले भनेका थिए -‘अन्तिम स्टेजको क्यान्सर हो, वेट एन्ड वाच।’ त्यसपछि उनी नेपाल फर्किएर आवश्यक थप उपचार अगाडि बढाइरहेकी थिइन्। उपचार सम्भव हुने आशामा डा खरेल श्रीमानसँग जापान समेत पुगेका थिए।
जापान पुगेर गरिएको उपचार र अनुसन्धानपछि डा खरेलको क्यान्सर ‘एडिनो कासिनो अफ स्टोमक पोलिडिफरेन्सियट’ भन्ने पत्ता लागेको थियो। ‘वेल डिफरेन्ससियट’को हकमा सुधार आउनसक्ने सम्भावना रहन्छ । तर उनको क्यान्सरको प्रकृति ठीक उल्टो थियो। हिरोसिमा युनिभर्सिटी हस्पिटलका चिकित्सकले पेटको क्यान्सरको अध्ययन र ‘प्रोगेस रेट’ दुवै निकै कम भएको बताएका थिए।